मनोरञ्जन – Nepal
मार्च 30, 2018 अप्रील 12, 2018 admin	Comment(0)
छविराज ओझाकै ब्यानरबाट रेखा थापा पहिलो नम्बरमा दर्ज भइन्, लामो समयसम्म । छविराजकै ब्यानरबाट करिअर थालनी गरिन्, शिल्पा पोखरेलले पनि । छविको क्याम्पबाट रेखालाई विस्थापित गर्ने जस/अपजस पनि शिल्पालाई नै जान्छ । तर, दुर्भाग्य ! उनले रेखाको जस्तो सफलता कमाउनु त परको कुरा, स्थापित हुनै संघर्ष गरिरहनु परेको छ अझै । न उनी अभिनीत फिल्मले […]
छायामा परिएला नि ?
पूजा शर्मा अभिनीत चार फिल्म लगातार फ्लप भए, थ्री लभर्स, मधुमास, अझै पनि र चंखे–शंखे–पंखे । करिअरको सुरुआतमै यति विघ्न ठक्कर खाँदासमेत पूजाले हरेस खाइनन् । हिट फिल्मको प्रतीक्षा गरिरहिन् । त्यही चाह पूरा गरिदियो, प्रेमगीतले । ‘ फ्यान फलोइङ’ ह्वात्तै बढ्यो । म यस्तो गीत गाउँछुले त्यो क्रेजलाई अझ दरिलो बनायो । दुवै फिल्ममा पूजा […]
पहिलो गाँसमा ढुंगा भेट्दा कस्तो हुन्छ, आशिरमान देशराज जोशीलाई सोध्दा थाहा हुन्छ । डेब्यु फिल्म ग्याङस्टार ब्लुज बक्सअफिसमा चिप्लिएको पीडा जो भोगेका छन् उनले । रिलिजअगाडि उनीप्रति चुलिएको अपेक्षा पनि यस फिल्मले पूरा गर्न सकेन । निर्देशक थिए, हेमराज बिसी । फिल्म फ्लप भएपछि हिरोलाई छोड्ने निर्देशकको जमात बाक्लो छ यहाँ । फेरि आशिरमान त्यसपछि […]